Decoupage: esi icho mma akwukwo ya na ifuru | Crafts Na
Decoupage: esi icho mma akwukwo na okooko osisi
Ka anyị lee otu esi eme mkpuchi nke akwụkwọ a mara mma ya na ihe eji eme ya. Bee ihe odide kaadiboodu nke mbu nke akwukwo (nke ga-abụ ihe mkpuchi), na-ahapụ 2 cm nke ụba n'ogologo na 2 cm n'obosara. Maka akwaa akwa akwa: maka mpempe mpụga dị ka mkpuchi abụọ yana mgbakwunye nke azụ nke ọtụtụ egwuregwu 6 cm na ogologo oge mmụba nke mkpuchi karịa 4 cm. Maka n'ime ihe mkpuchi ahụ na-egbutu otu mpempe akwụkwọ dịka obosara nke otu n'ime ihe mkpuchi ahụ tinyere mgbakwunye nke azụ nke egwuregwu gbakwunyere 4 cm na ogologo dị ka mkpuchi ahụ.
Maka ichota azụ nke akwụkwọ ahụ: Bee akwa mpempe akwụkwọ ogologo oge azụ nke akwụkwọ ahụ wee buru ibu karịa 4 cm. Iji mechaa okooko osisi: akwukwo ebiputara na Madagascar ma obu ihe kariri 4 cm n'ogologo na 2 cm n'obosara maka nkpuchi obula.
Mpepe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na mkpuchi azụ na ihu, na-ahapụ ọdịiche n’etiti ha nha nha nke azụ nke egwuregwu gbakwunyere ọkpụrụkpụ nke kaadiboodu. Mgbe ahụ, gbanye akụkụ nke ákwà ahụ na rectangles abụọ ahụ. Ghichaa akwụkwọ Madagascar na mkpuchi ahụ na gluu. Iji nweta ihe eji achọ mma, ụdị okooko osisi dị iche iche nwere ike belata ma jikọta ya na kwaaji.
Mepee mkpuchi na gluu na mpempe akwụkwọ akwa akwa maka ime (nke ga-emekwa ka azụ gị sie ike). Akụkụ nke kaadiboodu nke fọdụrụ n'echiche ga-abụ ebe ndabere iji kwado usoro a. Were akwụkwọ a gbakwunye na mkpuchi ma jupụta azụ na mpempe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ogologo nke mpempe akwụkwọ na obosara nke spain na 2 cm n'akụkụ ọ bụla. Jiri gluu.
Gbasaa mama ahụ na nchọpụta kaadiboodu ma debe peeji ikpeazụ nke akwụkwọ ahụ. N'ụzọ dị otú a, a na-etinye akwụkwọ ekwentị naanị n'otu akụkụ ka mkpuchi nke abụọ (mkpuchi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ) na-anọgide n'efu ma enwere ike iji ya mee ihe.
Ozi ndị ọzọ -
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Decoupage: esi icho mma akwukwo na okooko osisi
Jiri kandụl chọọ ụmụ amaala mma
Akwado igbe akwụkwọ